mr.phyo (နည်းပညာ): မြန်မာ ebooks များ(စာအုပ် 400ခန့်) Home
မြန်မာ ebooks များ(စာအုပ် 400ခန့်) မြန်မာပြည်က စာရေးစရာတွေရဲ့ မြန်မာ e-Books တွေပါ။ ကျွန်တော် တင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စုဆောင်းပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊ မူပိုင်ခွင့်ကိုနားလည်ပါတယ်။ သို့သော် နိုင်ငံရပ်ခြားရောက် မြန်မာတွေ အတွက်ရယ် … အတွက်ရယ် ဆိုတာတွေလဲ နားလည်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
အောင်ခန့် အနာဂတ်မျက်လုံးရှင် အောင်းခန့်
မြိုင် နီကိုရဲ အိုလေး
နီကိုရဲ ပန်းပွင်းကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမယ့်လမင်း အခုအောက်က အီဘွတ်တွေကတော့ www.shweone.wordpress.com က အီးဘွတ်တွေပါ။
Click နှိပ်ပြီး Save လုပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ ပိုမိုမြန်ဆန် လွယ်ကူပါသည်။
ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
(ဒဂုန်ရွှေမျှား) ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ (ဒဂုန်ရွှေမျှား)
ဘ၀တိုးတက်ရေး ၁ (ဇင်သန်.)
ဘ၀တိုးတက်ရေး ၂ (ဇင်သန်.)
ဘ၀တိုးတက်ရေး ၃ (ဇင်သန်.)
ပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန်းလွင်)
မှတ်စုများ ၂၀၀၄ (ဒေါက်တာသီဟ)
(ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) ***
နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓ မဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ (၀င်းသိန်းဦး)
အတွဲ (၁) အပိုင်း က (ဦးနု)
အတွဲ (၁) အပိုင်း ခ (ဦးနု)
- - ၀တ္တုဇာတ်လမ်းများ (သိပ္ပံမောင်ဝ)
ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ပထမပိုင်း (မင်းသိင်္ခ)
ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ဇာတ်သိမ်း (မင်းသိင်္ခ)
သွေမဖယ် စိုးပါနဲ.မေရယ် (နွမ်ဂျာသိုင်း)
တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (သိပ္ပံမောင်ဝ)
ကံချွန် - အင်တာဖီးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် (Nov 11,
200 ကံချွန် - မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း (Nov 11, 200 ကံချွန် -ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တ္တု တိုများ (Nov 11,200 ကံချွန် - ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ (Nov 11,200 ကံချွန် - ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ (Nov 11,200 ကံချွန် - ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ (Nov 11,200 ကျော်ဝင်း - စိန်ခေါ်ကြသူများ(06/2 ချစ်စံဝင်း - တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား
ဆောင်းဝင်းလတ် - ဆူးလေးဆူးတယ်ခုးမယ် (06/2 ပြည့်ပိုင်မူးအိမ်
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ကုန်ကြမ်း (0ct 10, 200 ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - ပန်းနုရောက်ပြကွက်ထဲက ကကြိုးလှတဲ့သတို့သမီး (oct 16, 200 ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - သတ္တမမြောက်နတ်သမီး ( oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - နွေရင်ခွင်အတွက်နှင်းစက်အနမ်း (
oct 16, 2008 )
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် - မိုးရထားပေါ်က လက်ပြတဲ့ကောင်မလေး
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် -မိုးကောင်းကင် လှည့်စားတဲ့ကြယ် (
မဟာဆွေ - အင်္ကျီပါး (Nov 28, 200 မဟာဆွေ - သူပုန်ကြီး ( Nov 28, 200 မဟာဆွေ - စာရေးကြီး (Nov 28, 2009)
မင်းခိုက်စိုးစံ - ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ကွဲပက်လက် လမ်းဆုံ
မင်းလူ - အဖွားကြီးသုံးယောက်နဲ့စကားပြောခြင်း (၀တ္ထုတို) (
မင်းလူ - ချစ်မြှားရှင်အစ ချစ်မြှားရှင်အဆုံး (Nov 28, 200 မင်းသိခ်-မြနန်းနွယ် (07/20)
မင်းသိင်္ခ - ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ ပျားဆွဲသောမုတ်ဆိတ်
မင်းသိခ် - မမင်းဖြူမှန်မှန်ပြော (Nov 28, 200 မြသန်းတင့် - လာခြင်းကောင်းသောအရှင်သခင် (ဘာသာပြန်) (07/29)
မြသန်းတင့် - ဂျူပီတာဖိုက် (07/0 မြသန်းတင့် - မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပတ်သက်၍ (07/29)
မြသန်းတင့် - စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ (ဘာသာပြန်) (07/0ဲမြသန်းသင့် - လမင်းကိုထရံပေါက်မှချောင်း ကြည့်ခြင်း (07/29)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်။(06/2 တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ် (06/27)
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးတွေရွာမှဖြစ်လျှင်ကွယ် (Nov
28, 200 တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်း (Nov 28, 200 တာရာမင်းဝေ - ပန်းခေတ်ကလမင်း
တာရာမင်းဝေ - လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ (oct 11, 200 တာရာမင်းဝေ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက် (oct 11, 200 တာရာမင်းဝေ - ရှူး (oct 11, 200 တာရာမင်းဝေ - သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ (oct 11, 200 တာရာမင်းဝေ -ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း (oct 11, 200 ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရုပ်ထုကျိန်စာ (09/03)
နီကိုရဲ - နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်။ (07/0 နီကိုရဲ - လှည့်စား (07/0 နီကိုရဲ
- အိုးလေး - (oct 11, 200 နတ်နွယ် - ကမ္ဘာစာပေ တစေ့တစောင်း (08/2 နတ်နွယ် - ရတနာလှိုဏ်ဂူ (ဘာသာပြန်) (08/2 နတ်နွယ် - မိုဗစ်ဗီးယား၏ အတိုင်းအတာနဲ့ အခြားဝတ္ထုတိုများ
(08/2 နတ်နွယ် - ရေအောက်တစ္ဆေ (ဘာသာပြန်)
နတ်နွယ် - အလည်လာတဲ့မိန်းကလေးရယ် (08/2 နတ်နွယ် - မင်းမှာသစ္စာလူမှာကတိ (ဘာသာပြန်) (08/2 နတ်နွယ် - ဒက်ဇယ်လာ (08/2 နွမ်ဂျာသိုင်း - တစ်မျိုးညာနွဲ့ သွေမဖယ် ပိုးပါနဲ့မေရယ် (Nov 28, 200 နွမ်ဂျာသိုင်း - နွေလေကညင်း (Nov 28, 200 ရွှေဥဒေါင်း - ဆော်လမွန်သိုက် (Nov 25, 200 ရွှေဥဒေါင်း - သူရဲကောင်းသုံးယောက် အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ အပိုင်း၃ (Nov 25, 200 ရွှေဥဒေါင်း - ဆင်စွယ်မင်းသမီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 200 ရွှေဥဒေါင်း - ဗတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီး အပိုင်း၁ အပိုင်း၂ (Nov 25, 200 ရွှေဥဒေါင်း - ရတနာပုံ (Nov 25,200 ရွှေဥဒေါင်း - အတွေးအမြင်နှင့် ရှူထောင့် (Nov 25, 200
ရွှေဥဒေါင်း - တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့ အတွေးအခေါ်များ (Nov 25, 200 ရွှေဥဒေါင်း - မြသက်မော် (Nov 25, 200 လယ်တွင်းသားစောချစ် - ပန်းများကိုမွေးစေသူ (07/04)
ဝေမူးသွင် - စိတ်ကောက်နတ်သမီး (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - ကျူးပစ်ဒ်ကိုတိုင်မသိတဲ့ မြှားတစ်စင်းအကြောင်း (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - သံယောဇဉ်ဖတ်စာ (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - လူပျောက်ကြော်ုငြာ (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - တစ်ခါတစ်ရံများ (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - ချစ်သူပြောတဲ့တနင်္ဂနွေပုံပြ င် (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - စက္ကုပန်းတွေရဲ့သီချင်း (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - အသဲကွဲလူရွင်တော် (oct 09,200 ဝေမူးသွင် - အဆင့်မြင့်ချည်တိုင် (oct 09,200 သုခ - ဒီဆောင်းဟေမာန် (Nov 28,200 သုခ - ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား (13 January, 2009)
သိပ္ပံမောင်ဝ - အဟိတ်…၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ (06/2 သိပွံမောင်ဝ - စစ်အတွင်းနေစဉ်မှတ်တမ်း (Nov 28, 2009)
- ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ် (09/07)
အထင်ကရ - မင်းနဲ့ကိုယ် (Nov 28, 200 အထင်ကရ - ကောင်လေးချစ်တဲ့သူ (Nov 28, 200 အထင်ကရ - သူဖန်ဆန်းတဲ့သင်္ကြန် (Nov 28, 2009)
ကလျာ - ဆောင်းဆည်းဆာ(Dec 23, 200 ကြည်အေး - မိ(06/2 ကြည်အေး - အပြင်ကလူ(06/2 ကြည်အေး - နွမ်းလျအိမ်ပြန် (Dec 23, 200 ကြည်အေး - ကျွန်မပညာသည် (Dec 23, 200 ဒဂုန်တာရာ + ကြည်အေး - စမ်းမြညတစ်ည (Dec 23, 200 ခင်ခင်ထူး - ဆံရစ်ဝိုင်း ၀တ္ထုတိုများ (Dec 23, 200 ခင်မျိူးချစ် - ကိုင်းပြောလိုက်စမ်းကွယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ (Dec 23, 200 ခင်မျိုးချစ်ဂျူနီယာဝင်း - ဆယ်နှစ်လရာသီပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ (06/30)
ခင်ဆွေဦး - ဒို့တိုင်ဌာနီ (Dec 23, 200 ခင်နှင်းယု - လာခြင်းကောင်းသောလူကလေး (Dec 23, 200 ခင်နှင်းယု - မွှေး (Dec 23, 200 ခင်နှင်းယု - ဘယ်လိုသောအကြောင်းကြောင့်( Dec 23, 200 ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - သွေး (07/04)
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - အဖြူ (၀တ္ထုတို) (Nov 28, 200 ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မေ့အိမ်မက် (Dec 23, 200 ဂျာနယ်ကျော်မမလေး
- ပျိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မိုး( ၀တ္ထုတို)(Dec 23, 200 ဂျူး - ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့
ဂျူး - သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ။ (၀တ္ထုတို)
ဂျူး — ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ (Dec 23, 200 ဂျူး - ရွက်လှေများ (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 200 ဂျူး - ပင်လယ်နဲ့တူသောမိန်းမများ (Dec 23, 200 စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) - နေပန်းပွင့်ရဲ့ အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ် (Dec 23, 200 စိုးမြတ်သူဇာ - feeling 35 (06/30)
စိုးမြတ်သူဇာ - အနားသတ်သစ္စာ (Nov 28,200 ဆွေဆွေအောင် - လွယ်အိတ်ကလေး (Dec 23, 200 ဆွေဆွေအောင် - လူညာကြီး (Dec 23, 200 ညိုနှင်းအိမ် - အိမ်မက်ပန်း အလွမ်းနှင်းဆီ (Dec 23, 200 ပုညခင်- ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မူ(Nov 11,200 ပုညခင်- ကြယ်တစ်ပွင့်နဲ့ စံပယ်ဖြူ (Nov 11,200 ပုညခင်- လျှိူဝှက်တိတ်ဆိတ်သော (Nov 11,200 ပုညခင်-
အချစ်နဲ့ကကြိုး (Nov 11,200 ပုညခင်- ညခင်းရဲ့ လမင်း(Nov 11,200 ပုညခင်- ကဗျာမမှီ (Nov 11,200 ပုညခင်- ချစ်သူရှိတဲ့မိန်းမ (Nov 11,200 မချိူမော်+ချစ်စံဝင်း - ဒေါင်းဖတ်စာပုံပြင်များ (Dec 23, 200 မစန္ဒာ - ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ်
မစန္ဒာ -န က်ဖြန်ခါ (07/0 မစန္ဒာ - တိမ်ဖုံးလို့လမသာ..(07/0 မစန္ဒာ - စိမ်းရွက်တစ်ဝေေ၀ (07/0 မစန္ဒာ - ဂျီဟောသူ (07/08/0 မစန္ဒာ - ဆံဌဂံ(Dec 23, 200 မစန္ဒာ - ပန်းပွင့်ခရေ(Dec 23, 200 မစန္ဒာ - ပုစ္ဆာ (Dec 23, 200 မစန္ဒာ - နှင်းဆီ(Dec 23, 200 မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၇ (Dec 23, 200 မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၄(Dec 23, 200 မစန္ဒာ - အရိပ်(Dec 23, 200 မဦး - ပန်းပွင့်မျက်နှာ လိပ်ပြာနှုတ်ခမ်း (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 200 မိုးငြိမ်းဧ နွေနေအောက်မှာ .. ကြွေ(Dec 23, 200 မိုးမိုး(အင်းယျား) - စိန်တစ်ပွင့်
မိုးမိုး(အင်းလျား) - ညီမလေးက အချစ်ကိုကိုးကွယ်သတဲ့လား
ရှင်မိုး(ဆေးတက္ကသိုလ်) - နေခြည်သစ်နှင့်စတင်ခြင်း (Dec 23, 200 ရှား - အဖော် (Dec 23, 200 လမင်းမို့မို့ - မောင် (Nov 28, 200 လူထုဒေါ်အမာ - မြန်မာမဟာဂီတ (Dec 23, 200 လွန်းထားထား - မာန၏နောက်ဆက်တွဲများ (06/30)
၀င်းဝင်းမြင့်(နန်းတော်ရှေ့ ) - ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ရင်ခုန်သံ
(Dec 23, 200 ဝေေ၀အောင် - ပွင့်ဦးခြွေသူ(Dec 23, 200 ဝေေ၀အောင် - ကျွန်မရဲ့ပင့်ကူ (Dec 23, 200 ဝေေ၀အောင် - နေရောင်လွမ်းတဲ့မိုးပြာကော င်းကင် (Dec 23, 200 ဝေေ၀အောင် - ခါချဉ်တစ်ကောင်အကြောင်း (Dec 23, 200 ဒေါက်တာနန်းဥမ္မာ - က္ကထ္တိယနဲ့ ဆေးပညာ (Nov 28, 2009)
သင်းသင်းသာ - စင်ရော် (Dec 23, 200 ကာတွန်းစာအုပ်များ
ကိုရွေထူး(ပြည်) - မတရားမလုပ်ပါနဲ့ နှစ်ပါသွားလေးကပါရစေ။ ကံချွန် - ကျကျမ်း ငွေကြည် - အူလှိုက်သည်းလှိုက်ဟာသများ (06/26)
စောတင်မောင် - ပျံလွားပါဝင်သော လွင့်မျောမိုးတိမ် ( ၁ + ၂) စောတင်မောင် - ပျံလွားပါဝင်သော လွင့်မျောတိမ်တိုက် ၃+၄
စောတင်မောင် - အမှောင်ကမ္ဘာ ( ၁+၂) စောတင်မောင် - အမှောင်ကမ္ဘာ ( ၃ +၄) စောတင်မောင် - နှောင်ကြိုးကိုယ်ဆီ ၁ စောတင်မောင် - နှောင်ကြိုးကိုယ်ဆီ ၂ စောတင်မောင် - အိမ်မက်ဆိုး ၁ ( Jan 1, 10)
- အိမ်မက်ဆိုး 2
- တွတ်ပီ - မြစမ်းသီလာ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ - သမိန်ပေါသွပ်ပါဝင်သော မညံတညံကာတွန်းများ
သမိန်ပေါသွပ် - မိုးနတ်မင်းကာတွန်းများ သမိန်ပေါသွပ် - မင်္ဂလာဆောင် သမိန်ပေါသွပ် - မထီးကျွန်း သမိန်ပေါသွပ် - ဘုံမြင့်စံ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ - သမိန်ပေါသွပ် ပါဝင်သော ကာတွန်းအက်ဆစ်
သမိန်ပေါသွပ် - ဖတ်ကြမယ်ဟေ့ကောင်းကောင်း ၀ိဇ္ဖာ -
တစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက် (ရွှေအဆင်း ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ) (PDF
version) ၀ိဇ္ဖာ - ပန်းတစ်ပွင့်၏ရံနံခက်ဆစ် (update)
တင်အောင်နီ - ပြာဂလောင်ပြာလချောင်ပါဝင်ေ သာ သူထက်ကဲ တင်အောင်နီ - ပြာဂလောင်ပြာလချောင်ပါဝင်သော ဝေလေလေ
တတိုင်းမွှေး - (တွတ်ပီ) မီးဝိုင်းနေသောလိပ်များ ( Jan
တတိုင်းမွှေး - (တွတ်ပီ) အချစ်အတွက်စွန့်စားခန်း ( Jan
တတိုင်းမွှေး - (တွတ်ပီ) ခြေတစ်ခြောင်းငေါင်း ( Jan 1,
တတိုင်းမွှေး - (တွတ်ပီ) မသေးမျှင်နှင့်ရွှေသုံကျပ်သား
( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး - (တွတ်ပီ) သက်သက်လွတ်စားသူများ ( Jan 1,
တတိုင်းမွေး - (တွတ်ပီ)အိမ်မက်ဇာတ်လမ်းများ ( Jan 1,
တတိုင်းမွေး - (တွတ်ပီ) လူပျိုကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်း(
Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး - (တွတ်ပီ)အစွမ်းထက်ဆုံးလက်န က် ( Jan 1,
တတိုင်းမွေး - (တွတ်ပီ) လူပျိုကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ၅(
တတိုင်းမွေး - (တွတ်ပီ)တွတ်ပီငှက်ချီခံရေ သာဇာတ်လမ်း (
ကာတွန်းအောင်ရှိန် - ဖိုးဆိတ်ဖြူနဲ့ ကြာဇံပါဝင်သော မဟာဂနိုင် အော်ပီကျယ် - သူ/သူမ အော်ပီကျယ်
- ကာတွန်းအတွေးစုများ တတိယအစု
ဦးသန်းထွတ် - မိုးခြိမ်းတာကြောက်တဲ့အမေနဲ့ အခြားပုံပြင်များ ( jan 12, 200 အရှင်ဆန္ဒာဓိက - ကျေးဇူးသိတတ်သော နွားကလေးနက်ချောနဲ့ ဓမ္မပုံပြင်များ
200 ကံချွန် - မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း (Nov 11, 200 ကံချွန် -ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တ္တု တိုများ (Nov 11,200 ကံချွန် - ကြားဖူးနားဝ ဟာသများ (Nov 11,200 ကံချွန် - ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ (Nov 11,200 ကံချွန် - ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ (Nov 11,200 ခင်မောင်တိုး(မိုးမိတ်) - မော့ရင်းရယ်စရာ အရက်လောကဟာသများ
ခင်မောင်တိုး (မိုးမိတ်) - အမေရိကန်သမတ္တတို့ရဲ့ ဟာသများ
(Nov 11,200 ဇ၀န - ဆိုးပေ ၁
(Nov 11, 200 ဇ၀န - ဆိုးပေ ၂ (Nov 11, 200 ဇ၀န - ဆိုးပေ ၃ ( Nov 11, 2008 )
မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ် - ရယ်စရာမောစရာ နိုင်ငံတကာ ဟာသများ
(07/0 ရဲစတိုင်း - ပြုံးပြီးမှရယ် (Nov 11, 200 ထူးဆွေအောင် - မကြောက်ဘူးဆို ထူးဆွေအောင် - ရေခြားမြေခြား (Nov 11,200 ဦးကျော်ဇေယျ - ရှေ့နေနှင့်တရားခွင်ဟာသများ (06/ 26)
အဏာဝါစိုးမိုး - ဟီးဟီးဟားဟားမော်တော်ကား (Nov 11, 200 အီကြာကွေး - တွေ့ရကြုံရရှတတလေးတွေ (06/30)
NYP -သင်္ကြန်စာ (Nov 11,200 ဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ
ချစ်နိုင်( စိတ်ပညာ) - စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာ .. စံ-ဇာဏီဘို - အချစ်ဗေဒင် (07/29)
ညီသစ် - ဆင်းရဲသောဖေဖေနှင့်ချမ်းသာ သောဖေဖေ (ဘာသာပြန်)
မောင်သာချို - သမီးလေးဖတ်ဖို့ (06/2 ရန်အောင် - အိမ်ထောင်ရေးအဘိဓမ္မာ ရဲမြလွင် - မြန်မာစောင်း (08/24) လူထုစိန်ဝင်း - မူပိုင်ခွင့် လူထုစိန်ဝင်း — လူငယ်နဲ့အချစ် လူထုစိန်ဝင်း — လူငယ်နဲ့တာဝန်ယူစိတ် ( PDF version) လူငယ်တို့စကားဝိုင်း (PDF version)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း - သမိုင်းနဲ့စကားပြောခြင်း ဦးဖိုးကျား - ၃၇ မင်း(06/2 ဦးဖိုးကျား - သီပေါမင်း ပါတော်မူအရေးတော်ပုံ (08/24)
ဦးပေါ်ဦး ၏ စကားအင်္လကာ (06/2 တတိယမြန်မာစစ်ပွဲနှင့် မင်းလှခံတပ် (သုတသေနစာတမ်း) (08/24)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း - ငါပြောချင်သမျှ ငါအကြောင်း ဒေါက်တာသန်းထွန်း - သမိုင်းနဲ့စကားပြောခြင်း (07/29) ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို — ထူးဆန်းထွေလာစားစရာနဲ့ အဟာရဗေဒ
နေ၀င်းမြင့် - အိုင်ဒီယာအက်ဆေးများ (06/2 နေသူရိန်မှတ်တမ်း (08/24)
အောင်သင်း - အနာဂတ်ကိုမကြောက်နဲ့ (06/2 အောင်သင်း- မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္တ၀င်မိတ်ဆက် (06/2 ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ
ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် - ဖိုနဲ့မဆက်ဆံရေး ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေလ်း - သန္ဒေကာတာ ( ကိုယ်ဝန်တားခြင်း နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်) (07/0 ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို — ထူးဆန်းထွေလာစားစရာနဲ့ အဟာရဗေဒ
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်- စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြသူများ သိန်းဖေမြင့် - ၁၉၃၀ တစ်ဝိုက်မြန်မာနိုင်ငံရေးသ မိုင်း
ဓားဘုရင် အထ္တုပတိ အပိုင်း ၁
၈ သရဖူငြင်းသော သိုင်းဧကရာဇ်
အပိုင်း ၁၊ အပိုင်း ၂၊ အပိုင်း
၃၊ Share !
sai nay lin18 September 2013 at 09:56အခုလိုစာအုပ်တွေကို တကူးတကစုဆောင်းထားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တချို့စာအုပ်တွေဒေါင်းလို့ မရဘူး ကူညီပါဦး အကိုရေ။ReplyDeletekokoaung16 November 2013 at 15:11တော်တော်စုံတာပဲ very likeReplyDeleteAung Tun Oo27 November 2013 at 22:05thankReplyDeleteဖြိုး လေး28 November 2013 at 10:07Down lot ma ya buu byoeReplyDeleteThein Myint16 February 2014 at 06:25Thanksalot...... wish u happy and success in ur entire life...ReplyDeletePe Thu18 May 2015 at 03:56thanksamillion for sharing general knowledgeReplyDeleteAdd commentLoad more...